श्रीमती र उनका प्रेमीको हत्यामा जन्मकैद काटिरहेका कैदीको कथा, हेर्नुस् युट्युबमा :: Setopati
श्रीमती र उनका प्रेमीको हत्यामा जन्मकैद काटिरहेका कैदीको कथा, हेर्नुस् युट्युबमा
'द शश्वांक रिडेम्प्सन' कठोर जेल जीवन भोगिरहेका पात्रको जेलबाट मुक्ति पाउने आशाको कथा हो।
आफ्नी श्रीमती र उनका प्रेमीको हत्या आरोपमा बैंकर एण्डीलाई अदालतले जन्मकैद सजाय सुनाउँछ। त्यसपछि मुख्य पात्र एण्डी डुफ्रेशनलाई शश्वांक जेलमा राखिन्छ र जेल फिल्मको केन्द्रीय पात्रसरह बनेर आउँछ।
जेलभित्र विभिन्न स्वभावका कैदी छन्। जेलरले उनीहरूलाई हरेक दिन यातना दिन्छन्। झुटो आरोपमा जेल परेका उनी जेलभित्रको वातावरणमा 'फिट' देखिँदैनन्।
जेलभित्र 'फिट' हुन त्यहाँको निर्मम र निराशाजनक दैनिकीमा अभ्यस्त हुनुपर्छ। आक्रोशित कैदीबीच एण्डी सधैं शान्त देखिन्छन्। शान्त र मौन एण्डीले अनेक कारण जेलर र कर्मचारीहरुको यातना व्यहोर्नुपर्छ। तर उनी आफ्नो आशा मर्न दिँदैनन्। जेलबाट रिहाइ हुने दिन कुरिरहन्छन्।
फिल्मको मुख्य पात्र एण्डी भए पनि हामी उनलाई त्यसरी नै चिन्छौं, जसरी अरू पात्रले देख्छन्।
यो फिल्मको न्यारेटर पात्र रेडले एण्डीको शालीन स्वभाव र मुक्तिको सपना दर्शकलाई भनिरहँदा कथाभित्र रेड र एण्डीको मित्रता बढिरहेको हुन्छ। जेलमा २० वर्ष बिताइसकेका रेड जेलका 'गार्जियन फिगर' हुन्।
एण्डी उनको जीवनमा संयोग भएर आउँछन्। आफ्नै धुनमा रहने एण्डीको बौद्धिकता र विनम्रताबाट प्रभावित रेड पनि जेलबाट मुक्त हुने सपना देख्न थाल्छन्। यत्तिकैमा एकदिन अचानक एण्डी जेलबाट गायब हुन्छन्।
त्यसपछि रेड र एण्डीको भेट वर्षौपछि प्रशान्त महासागरको तटमा कसरी हुन्छ होला? यो भेट हुनुअघि कथाले लिने मोड के के होला? फिल्म हेरेर थाहा पाउनुस्।
रेड पात्रले कथा न्यारेट गर्दैगर्दा यी दुईबीच गाँसिने मित्रताको कथाले मन जित्छ।
फिल्ममा थोरै भूमिकामा देखिए पनि पात्र ब्रुकको कथाले पनि दर्शकका मनमा गहिरो छाप छोड्छ। सधैँ चुपचाप रहने बुढा लाइब्रेरियन ब्रुक वर्षौंसम्म जेलमा बिताएपछि एकदिन अचानक आत्महत्या गर्छन्। यो पनि फिल्मको महत्वपूर्ण घटना हो जसले फिल्मलाई 'इमोसनल टच' दिएको छ।
स्टेफेन किङको उपन्यासमा आधारित भएर फ्र्यांक डाराबोन्टले निर्देशन गरेको 'शश्वांक रिडेम्प्सन' आशा, धैर्य र मित्रताको कथा हो। फिल्मको नामजस्तै यसले मुक्तिको कथा त भन्छ नै, आत्मिक मुक्तिको कथा पनि बोल्छ।
निर्दोष कैदीको मुक्त हुने चाहनाबाहेक फिल्मले कैदीहरूको मानवअधिकारसम्बन्धी पक्ष पनि उठाएको छ। जेलभित्र संगीत र पुस्तकको प्रयोगले कसरी कैदीहरूबीच आत्मीय सम्बन्ध बनाउँछ भन्ने फिल्ममा सुन्दर रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।
सन् १९९४ मा बनेको 'शश्वांक रिडेम्पसन अस्कर अवार्डमा सात विधामा मनोनयनमा परेको थियो। आइएमडिबीमा सबभन्दा धेरै रेटिङ पाएर नम्बर १ मा पर्न सफल 'शश्वांक रिडेम्प्सन' दर्शक र समीक्षकको मनपर्ने फिल्मको सूचीमा पर्दै आएको छ।
एण्डीका रूपमा टिम रोबिन्स र रेडको भूमिकामा मोर्गन फ्रिम्यानको उत्कृष्ट अभिनय छ। फिल्ममा उनीहरूबीच हुने संवादमा जीवन दर्शन, स्वतन्त्रता र व्यवस्थाबारे गहन कुरा आउँछन् र दर्शकको मन-मस्तिष्क छोएर जान्छन्।
'मैले आफैंलाई सम्झाउनुपर्छ, केही चराहरूलाई कैद गरेर राख्न सकिन्न।'
'आशा खतरनाक कुरा हो मेरो साथी, जसले मान्छेको ज्यान लिन सक्छ।'
'म त्यो बुलेटबाहेक उसको दिमागमा आएको अन्तिम कुरा सोच्न चाहन्छु।'
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, चैत २०, २०७७, १८:५३:००